Shina: Ho avy “angamba” ny fanafarana kolontsaina tsy misy famerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 12:59 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay taona 2010 ny lahatsoratra teny Aglisy)
Vaovao malaza tamin'ny herinandro lasa teo avy amin'ny Reuters- “Nanaiky ny fanapahan-kevitry ny OMC (fikambanana manerantany misahana ny varotra) misahana ny entambarotra fialam-boly i Shina”; “OMC: tsy afaka mampiasa sivana hanamarinana ny sakana ara-barotra” i Shina- tsy dia nahazo fitantarana betsaka araka ny niheveran'ny olona azy, ary niafara tamin'ny fanesorana izany ireo media sasany namoaka ny tantara.
Ny vaovao tao amin'ny Reuters dia manondro ny taratasy nosoniavin'ireo ambasadera ao amin'ny OMC avy any Shina sy Etazonia izay nahitana fifanarahana fa hanaisotra ny sakana rehetra amin'ny fanafarana boky, mozika, sarimihetsika sy vokatra fialam-boly hafa i Shina amin'ny volana martsa amin'ny taona ho avy (2011).
Na dia tsy miseho mivantana avy hatrany aza, araka ny tatitra voalazan'ny Reuters, izay navoaka tao amin'ny tranokalan'ny OMC ny taratasy voalaza, azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny Foiben'ny OMC ao amin'ny Ivon-toerana Chung-Hua momba ny fikarohana ara-toekarena ny antontan-taratasy mitovy be amin'izany:
“… Nifanaiky i Shina sy i Etazonia fa tokony ho 14 volana manomboka amin'ny datin'ny 19 Janoary 2010 ny fe-potoana ara-drariny ho an'i Shina mba hampiharana ny fandrisihana sy ny fanapahan-kevitry ny Sampana Mpandamina ny Disadisa (“DSB”) amin'ny fifandirana i Shina – handrefy ny zo ara-barotra sy ny tolotra fanapariahana ireo famoahana sasany sy ny vokatra haino aman-jery fialam-boly (WT / DS363)... “
Nahatonga ny sasany hanontany mikasika ny vaovao ny tsy fahampiam-baovao misimisy kokoa mikasika izay zava-bita mendrika homarihana.
Na izany aza, nalaina haingana sy navoakan'ny fampahalalam-baovao Shinoa marobe ny tantara; Ireto ambany ireto ny fanehoan-kevitra momba izany.
Manohana ny fahalalahana ara-barotra aho, ary manohitra ny filazana amiko izay azoko na tsy azoko vidiana na amidy. Tokony hisokatra ny tsenan'i Shina, ary tsy voatery ho vidiana ireo zavatra tsy ilaintsika! Ahoana no hilazana hoe fahalalahana ara-barotra raha toa ka lazaina amin'izay azontsika na tsy azontsika vidiana sy amidy isika?
Ny tsy ampy ao Shina dia teknolojia, fa tsy kolontsaina!
Koa satria misokatra izao [ny tsena], avelao hiditra ny vokatra ara-kolontsaina avy amin'izao tontolo izao.
Andraso…..midika ve izany fa…ho ankatoavina avokoa ny.endrika ho avin'ny ” World of Warcraft ” [Tontolon'ny Fitaovam-Piadiana]
Mbola hanana orinasa roa fitsinjarana horonantsary manokan'ny fanjakana i Shina, ary tsy voatery hampakatra ny fetran'ny sarimihetsika vahiny 20 isan-taona misy amin'izao fotoana izao. Hametraka ny zony hanivana ireo sarimihetsika vahiny ihany koa ny governemanta Shinoa. Noho izany, mbola afaka mitsipaka ny fifanarahana i Amerika na ny orinasa vahiny hafa mitondra filma eto amin'ny filazana sivana tsy voaantoka na fetrisan'ny fitsinjarana, sa tsy hiteny ianao?
Ny tena tokony hafarantsika dia teknolojia, fa tsy ity hadalana ity.
Mbola vao hoavy ny korontana.
Ny ilain'i Shina dia teknolojia, teknolojia, teknolojia!
Inona no tsy mety amin'ny kolontsaina Shinoa? Mila mifaninana ve izy?
Raha mbola atao ivelan'ny lalàna ny sivana, dia afaka manivana izay tiany izy ireo. Ary fantatsika rehetra fa tsy ho atao araka ny lalàna mihitsy ny sivana.
Raha miresaka afa-tsy izay fantatro ihany, tsy mbola voasoratra mihitsy anaty lalàna ny fanivanana horonantsary, ary ny sivana tanterahina dia miankina tanteraka amin'ny hoe iza no ao ambadik'izany. Efa nikitikitika momba izany nandritra ny taona maro ny indostrian'ny horonantsary, mitaky fananganana rafitra fanomezana naoty, izay rehetra azo atao, saingy tsy nisy na inona na inona tontosa ary tsy nisy antony nolazaina. Izany no antony mahatonga ny fanapahan-kevitry ny OMS ho toy izao, amin'ny ankapobeny, ho an'ny rakitsoratra fotsiny. Ahoana no ahafahana mampihena ny sivana amin'ny sarimihetsika? Heverinao ve fa ny Warner Brothers na iza na iza hahavita hanala zavatra tahaka izay nataon'ny Google? Aza manantena izany.
Tsy misy holazaina?
Fahagagana fotsiny raha tsy efa nofafana sahady ity vaovao ity…
Mikasika ny vaovao tahaka izany, hanatrika ny Fampiratiana ao Shanghai amin'ity herinandro ity amin'ny “Andro Fankalazana ny OMC” ny tale jeneran'ny OMC, Pascal Lamy, izay hanaovany kabary mandritra izany.